एमसिसिको पक्षमा विज्ञप्ती निकालेर विवेकशील नेपालीले आफ्नै ईतिहासको अपमान गरेको छ - छिरिङ तामाङ - News Portal in Nepali
वि.सं १३ श्रावण २०७८, बुधबार
स्टिम न्युज वि.सं १६ माघ २०७६, बिहीबार १२:३५
अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको एमसिसि सम्झौताको विषयमा देशको विभिन्न दल र व्यक्तिगत रुपमा विचारहरु, टिकाटिप्पणी आईरहेका छन । यसै बिच केही दिन अघि आफुलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा चिनाउन प्रयासरत दल विवेकशील नेपालीले पनि एमसिसि सम्झौताका केही बुदाँहरुमा संशोधन गरेर लागु गर्दा फरक नपर्ने खालको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर सोही दलको केन्द्रिय सदस्य र सदस्यहरु बिच यो विषयमा मत बाझिएको छ जुन सामाजिक संजालमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दलले आफ्नै ईतिहासको अपमान गरेको भन्दै दलको विज्ञप्ती भन्दा फरक धारणा राख्नुभएका विवेकशील नेपालीका केन्द्रिय सदस्य छिरिङ तामाङ संग हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौ।
दलले आफ्नो विज्ञप्ती निकालिसकेपछि तपाईहरुले फरक मत राख्नु भएछ नी किन ?
पहिलो कुरा त दलले विज्ञप्ती निकालिसके पछि फरक मत राखियो भन्नु गलत हो । दलको पछिल्लो केन्द्रिय समितिको वैठकको पहिलो एजेण्डा नै एमसिसि संबन्धमा थियो । उक्त वैठकमा मैले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको थिएँ ।
त्यसोभए तपाईको धारणा के थियो र अहिले किन विवाद त ?
राजनैतिक दलमा यस्तो कुरालाई विवाद भन्न मिल्दैन । यो छलफल नै हो । होला केही साथीहरुले सामाजिक संजालमा अलि आक्रोसित ढंगबाट आफ्नो विचार संप्रेषण गरिरहेका वा भएका होलान तर त्यसलाई विवाद नै भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा मैले राखेको स्पष्ट धारणा के थियो भने एमसिसि सम्झौता अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एक भाग हो/उप-रणनीति हो । यो कुरा मैले बोलेको हैन विभिन्न डकुमेन्टहरूले बोलेको छ । अमेरिकन अधिकारीहरु, हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको जुन २०१९ र नोभेम्बरको रिपार्टहरुमा उल्लेख छ । नेपाल एउटा असंलग्न राष्ट्र हो र रहनुपर्छ । त्यसैले मैले एमसिसि लाई पुर्ण रुपमा खारेज गर्न माग गरेर अघि बढौ भनेको थिए ।
अनि कुरा राखिसक्नु भएको रहेछ त; अब दलले एउटा निर्णय गरिसक्यो किन असहमति त तपाइको ?
कुरा त राखिएको हो तर उक्त वैठकमा यस बारेमा केही पनि निर्णय भएको थिएन । एमसिसिको पक्षमा कोही पनि बोल्नु भएन । केही केन्द्रिय सदस्यहरुले मध्यमार्गी बाटो अपनाउ भन्नुभयो तर किन र के को आधारमा त्यो स्पष्ट थिएन । अनि अध्यक्ष ज्युले केन्द्रिय सदस्य महेश पाठकको नेतृत्वमा प्रभावशाली नेतृ रन्जु दर्शना सहित को कार्यदल बनाउनु भयो यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन । कार्यदल मा अरु साथीहरु पनि जोडिनु भयो र केही दिनपछि एमसिसि सम्झौता राष्ट्र हित विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुर्ण रुपमा खारेजीको माग गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो तर त्यो प्रतिवेदनले धेरै साथीहरुको सात्तो गएछ । वैठकमा पनि नबोल्ने, कार्यदलमा आएर बहसमा सहभागी हुन भन्दा पनि नजाने केन्द्रिय समितिकै साथीहरुले यसरी खारेजीको माग गरेर विरुद्ध मा जानुहुन्न भन्नु भएछ र कार्यदलको प्रतिवेदन पुरै उल्टाएर अहिलेको विज्ञप्ति आएको हो । मेरो र धेरै साथीहरुको असहमति यहीं निर हो ।
ओहो कार्यदलको प्रतिवेदन केही मान्छेले उल्टाउने भन्ने पनि हुन्छ त ?
त्यही त अचम्म छ ! म सामाजिल संजालमा केही समय देखि टाढा थिए । मेसेन्जर ग्रुपले गरेको निर्णय हो यो । अब यसलाई हामीले कसरी मान्ने ? कसरी आधिकारिक भन्ने ? प्रविधि र सामाजिक संजालको गलत उपयोग भएको छ ।
तपाईहरुले नमाने पनि आधिकारिक भनेर आईसक्यो; अब के गर्नुहुन्छ त ?
२०७२ को भुकम्प पश्चात नेपालले आयोजना गरेको विभिन्न राष्ट्रहरुको अनुदान सहयोग कार्यक्रमको गेट बाहिर बसेर अनुदान नलिउँ, दानले कहिले पनि देश बन्दैन भनेर प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेको ईतिहाँस हो हाम्रो दलको । एमसिसि पनि एक अनुदान नै हो अझ यो त रणनीतिक अनुदान हो । यस्तो कुरामा दलले कसरी यो खाले धारणा बनाउन सक्छ म लगायत धेरै साथीहरु अचम्ममा परेका छौ । अझ त्यो बेला प्रक्राउ परेका साथीहरु आज आज पदाधिकारी र केन्द्रिय समितिमा समेत हुनुहुन्छ । दलको यो धारणाले आफ्नै ईतिहासको अपमान गरेको छ । हामी फरक मत लिएर दलको वैचारिक स्पष्टताको लागि अब कुरा उठाउँछौ ।
अन्त्यमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आफुहरुलाई चिनाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ । यही तरिकाबाट तपाईहरु यो देशमा आफुलाई स्थापित गराउन सक्नुहोला त ?
मलाई झुठो बोल्नु छैन । कदापी सकिदैन । वैचारिक स्पष्टता नभई नागरिकले हामीलाई कसरी पत्याउछन ? ४ वर्ष अघि अनुदान नलिनु भन्ने र ४ वर्ष पछि लिनु भन्ने यस्तो पनि हुन्छ ? मलाई त लाज लागिरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति भनिनु र हुनुमा धेरै ठुलो अन्तर छ । विगत देखी दलले गरेको गल्ती पनि यही हो कि हामीले हाम्रो विचारहरुमा स्पष्टता ल्याउन सकेनौ । सधै मध्यमार्गी भन्दै ढुलमुले विचार अघि सार्यौ र नागरिकको मनमा बस्ने असफल प्रयास गर्यौ । जुन पुर्ण रुपमा विफल भईसकेको छ । एमसिसिको छलफल पछि दलमा वैचारिक स्पष्टताको कुरा जोडतोडका साथ उठेको छ । अब यही विषयमा काम गर्छौ ।नेपालमा स्थापित हुनु महत्वपुर्ण कुरा हैन, एक पल्ट स्थापित भईसकेपछि निरन्तरता दिन सक्नुपर्यो जुन वैचारिक रुपमा परिपक्व नभई हुदैन ।
सभामुख सापकाेटाले पहिलाे संसद बैठक सञ्चालन गर्दै
नेपालको पुर्बीनाकामा कोरोना भाइरसको जाँचका लागि ‘हेल्प डेस्क’